WINE 6.18 inosvika neiyo HID joystick yakagadziriswa ne default | Linux Vakapindwa muropa
Kunge mamwe maChishanu ese, masvondo maviri apfuura vakazviita ne v6.17 kubva "Waini Haisi Emulator", WineHQ yakakanda manheru apfuura WAINI 6.18. Iyo zvakare zvakare yeiyo Stage vhezheni, ndokuti, imwe yeayo mune akawanda shanduko uye mitsva maficha akawedzerwa, asi akawanda zvekuti anogona kuuya nedhoketi, saka haigamuchire yakagadzika chitaridzi. Kugadzira inzira yakanaka kune avo vanoda kutarisa kana chirongwa cheWindows chatoita nemazvo pane isiri-Microsoft system.
MuWINE 6.18 ivo vakagadzirisa 19 zviputi, asi iyo chinja runyorwa kubva ku6.17 inokwira kuenda ku484. Shanduko mazana mashanu hadziwanzo kubatwa, asi mune iyi feat, Rémi Bernon ave nezvakawanda zvekutaura, ndiani anga achitarisira asiri pasi pe500 yavo. WainiHQ inongoratidzira mashoma seanonyanya kukosha, uye iwo ndiwo aunazvo pazasi.
WINE 6.18 Staging dzakakwirira
Shell32 uye Raibhurari raibhurari dzakashandurwa kuita PE.
Unicode dhata yakagadziridzwa kuita Unicode vhezheni 14.
Mono injini yakagadziridzwa kune vhezheni 6.4.0, iine COM yekuvandudza.
Rakawanda basa reDwarf 3/4 debugging rutsigiro.
HID joystick inogoneswa nekutadza.
WAINI 6.18 ikozvino inogona kutorwa kubva izvi madokero kumwe kubatana. WineHQ zvakare inopa ruzivo kurodha pasi izvi uye neramangwana zvigadziriso nekuwedzera iyo yepamutemo repository yeLinux pano, asi inogona zvakare kuiswa pane macOS uye Android. Kana dura rikawedzerwa, unogona kusarudza pakati peshanduro, Stage kana Dev shanduro.
Panguva ino mukusimudzira, isu tave kutosvika panguva iyo Vanoburitswa Vanokwikwidza vachatanga kusvika, asi kazhinji vhezheni inotevera ichave WINE 6.19 uye kuti ichaburitswa pa inotevera Gumiguru 8. MuWINE 5.x, makumi maviri neshanu maShanduro akaburitswa, panguva iyi vakatoburitsa Vanoburitswa Vanodaidzwa pasvondo. Kana iyo nyowani Stage vhezheni ikasimbiswa, ivo vanozo-regedza zvakare mazana emazana tweaks.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » WINE 6.18 inouya neMono 6.4.0, iyo HID joystick yakagadziriswa nekusarudzika uye ingangoita mazana mashanu shanduko